Thursday, April 19 , 2018 | बिहीबार, बैशाख ६, २०७५ |
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ ८ print
केयर गिभरमा इजरायल जानका लागि ६० जना युवाहरु छनौट भएका छन्।
इजरायलको पपुलेसन एण्ड इमिग्रेसन अथ्योरिटी (पिआइबिए)ले १ सय जनाको नाम छनौट गरी पठाएकोमा पुनः भाषा परीक्षा लिई १८ पुरुष र ४२ जना महिला छनौट भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
कामका लागि आउने युवामा ८० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने पिआईबिएको शर्तअनुसार २० प्रतिशत पुरुषले मात्रै यो अवसर पाउने छन्। यसअघि पहिलो चरणमा केही युवाहरु इजरायल पुगिसकेका छन्। इजरायलमा श्रम गन्तव्य खुला गरिएपछि अहिले दोस्रो चरणमा ६० युवाहरु जान लागेका हुन्।
छनौट भएका यी ६० जना युवाहरुले अब इजरायल गई वृद्ध, अशक्तहरुको सेवा गर्नुपर्नेछ। कुल १४ सयभन्दा बढी युवाले इजरायल जानका लागि आवेदन दिएका थिए। तुलनात्मक रुपमा राम्रो आम्दानी र काम सहज हुने भएकाले इजरायल जानका लागि पनि नेपाली युवाहरुको उल्लेख्य आकर्षण पाइन्छ।
क-कसको निस्कियो नाम?
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ८, २०७४ १५:१४:१४
'म्यानपावर व्यवसायी संघको महासचिवमा अब मेरो पालो'
एनजिओको जागिर हुँदै अन्जानबस खानपुगेको म्यानपावरको जागिरपछि उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने आँट गरिरहेकी छिन्। वैदेशिक रोजगार मंचको तर्फबाट आसन्न अधिवेसनमा उनले महासचिवमा उमेद्वारी दिने तयारी गरेकी छिन् ।
कोरियन भाषा परीक्षाका लागि २६ केन्द्र तय, परीक्षा दुई सिफ्टमा हुने
आगामी जेठ २७ र २८ गते हुने कोरियन भाषा परीक्षाका लागि केन्द्रहरु तोकिएको छ। इपिएस कोरिया शाखाले दुई सिफ्टमा परीक्षा संचालन गर्नेगरी राजधानीका विभिन्न स्कुल तथा कलेज गरी २६ केन्द्रहरु निर्धारण गरेको छ। पहिलो सिफ्टको परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म र दोस्रो सिफ्टको परीक्षा १२ बजेदेखि २ बजेसम्म हुने इपिएस शाखाले जनाएको छ। यो वर्ष ७५ हजार ६ सय १२ युवाले रोजगारीका लागि इपिएस परीक्षामा सहभागी हुनेछन्।
पैसा कमाउन खाडी गइरहनुपर्दैन
सुवेदी परिवारको खुसी शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ। दुई बूढाबूढी, जेठो, कान्छो छोरो र एकजना सहयोगीका साथ बाख्रापालन गरिरहेका सुवेदीको पहिलो भनाइ छ ‘पैसा कमाउन खाडी गइरहनु नपर्ने रहेछ’। उनले बाख्रापालन २०७० को असारमा सुरु गरेका हुन्। बाख्रापालन व्यवसायले काम र दाममात्र होइन सामाजिक सम्मान पनि दिइसकेको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारमा समस्या पर्‍यो ? अनलाइनबाटै समाधान गर्नुहोस्
वैदेशिक रोजगारका क्रममा परेका समस्याहरु तपाईले अब अनलाइनबाटै सरकारलाई भन्न पाउनुहुने भएको छ। तपाईका समस्यालाई सरकारले जतिसक्दो चाँडो सम्वोधन गर्नेछ र तपाईको समस्या समाधानका लागि के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि अनलाइनबाटै थाहा पाउनुहुनेछ। विदेशमा रहेका आफन्तको खोजतलास तथा उद्धार गर्नुपरे, मृत्यु भएका आफन्तको शव झिकाउनु परे, कामदार तथा तिनमा परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपरे लगायतका वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्याका बारेमा नेपाल सरकारलाई अनलाइनबाट निवेदन दिन सकिन्छ।
साउदीमा अवैध बसेकालाई बर्हिगमन भिसा, असार १४ गतेभित्र स्वदेश फर्किसक्नुपर्ने
वैदेशिक रोजगारका क्रममा साउदी अरब गएर अवैध रुपमा बस्दै आएका नेपाली कामदार आगामी असार १४ गतेभित्र स्वदेश फर्किसक्नु पर्ने भएको छ। साउदी सरकारले आममाफी दिएको समय असार १४ गते सकिन्छ। साउदी सरकारले गत चैत १६ गतेदेखि आममाफी लागू गर्दै त्यसको ९० दिनभित्र साउदी छाड्न चेतावनी दिएको थियो।
सैलुनमा दाह्री काट्नुभन्दा मेसिन किनेर काट्नु ठीक रहेछ
सबै बस्तु तथा सेवामा महँगी बढ्दै गएको छ। काठमाडौंमा कपाल र दाह्री काटेको भाउ अचाक्ली महँगो छ। मेरो दाह्री हप्ता हप्तामा काट्नु पर्छ। शैलुनमा एक पटक दाह्री सेभिङ गराएको ५० रुपैयाँ लाग्छ।
राजेश सापकोटा, कपन, काठमाडौँ
महँगो स्मार्टफोन भन्दा बजेट स्मार्टफोन नै जाति
म जापानमा छु । नेपालीहरु महँगो स्मार्टफोनमा किन्छन् । अहिले बजारमा आएका बजेट स्मार्टफोन र ती महँगा स्मार्टफोनको लगभग फिचर उस्ताउस्तै छन् । काम एकै गर्ने हो। त्यसैले महँगो रकम हालेर राम्रो स्मार्टफोन किन्नुभन्दा बजेट फोन किन्नु नै उत्तम देखेँ।
सौरभसिंह कार्की, जापान
दहीमा केमिकल मिसावट भएको थाहा पाए पछि किन्नै छाडेँ
म चावहिलमा बस्छु । म गौशाला तथा चावहिल आसपासमा रहेको डेरीबाट खुल्ला दही किन्ने गरेको छ। मैले किन्ने दहीमा मिसावट भएको मैले पाएको छु । बाक्लो, लेसिलो पाराको दही स्वादमा पनि फरक पाएको छु ।
मनोज सुवेदी, चावहिल
जिराधनियाँ मिसाएर आफैँले पिसेको मसला उत्तम
मैले मसलाको व्यापार गर्न सुरु गरेको करिव ११ वर्ष भयो। घट्टेकुलोमा मेरो गृहिणी नामको मसला पसल छ। भर्खरै मैले आफ्नो उत्पादन चिनाउन अधिकारी मसला उद्योगको नामले ब्राण्डिङ पनि सुरु गरेको छु।
विवेक अधिकारी, घट्टेकुलो काठमाडाैं
काठमाडौंमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? कति लाग्छ खर्च
घरको छतमै फलाउनुहोस् अर्गानिक तरकारी!
कृषि विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस दिने
देशभर फरक फरक जग्गा मापन इकाईहरु !